Raha hividy iPad Mini Retina ianao dia tandremo ny vidin'ny varotra | Vaovao IPhone
Cristina Torres sary placeholder | | iPad
Eo am-pandinihana mividy iPad vaovao aho izao. Ary ny marina dia mizara tanteraka ny hevitry ny mpiara-miasa amiko Alejandro fa ny Ny safidy tsara indrindra momba ny sandam-bola amin'ireo fitaovana iPad Mini eny an-tsena dia ny an'ny iPad Mini 2, antsoina koa hoe iPad Mini Retina. Saingy, tamin'ny fiezahana hahitana raha sendra teo amin'ny fiainana aho dia nahita tolotra izay hampihena ny vidin'ny 289 euro amin'izay amidy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny magazay Apple, na raha hitako amin'ny iray amin'ireo fonosana misy fonony ireo izay mivoaka indraindray tamin'ny Krismasy dia taitra aho nahita ny vidiny sasany natolotra azy ireo tany amin'ny magazay samy hafa.
Mazava ho azy fa ny mpampiasa iray izay somary vao avy amin'ny tontolon'ny fiantsenana an-tserasera, na tsy mifantoka loatra amin'ny toetra mampiavaka ny takelaka sasany amin'ny hafa dia mety ho diso, dia nivonona ny hitantara ny zavatra niainana ato amin'ity lahatsoratra ity aho, amin'ny fikasana izay rehetra mitady iPad mini Retina, na iPad mini 2 dia tsy mahazo tahotra tsara. Ao amin'ny pikantsary voalohany asehoko anao dia afaka mahita sary nalaina tao amin'ny tranokala Fnac androany ianao izay amidin'ny mpivarotra ny vokatra iPad Mini azy tany am-boalohany ho an'ny 304,06 euro. Ny vidim-panjakana ofisialy dia 229 euro, noho izany dia miresaka manodidina ny 100 euro eo ho eo isika tena sandany izay azontsika atao amin'ny fivarotana Apple rehetra.
Saingy raha mitranga hatrany amin'ireo mpivarotra tsy miankina ireo zavatra ireo, satria samy afaka manome lanja ny vokariny araka izay tiany ny tsirairay raha mbola misy mividy azy amin'ny vidiny avo kokoa noho ny vidiny ofisialy, dia mbola gaga ihany aho amin'ny fiverenan'izy ireo ao amin'ny El Corte Inglés miaraka amin'ny fihenam-bidy amin'ny vokatra Apple. Manaitra fa amin'ny takelaka iray manontolo amin'ny tolotra dia ny vokatra tamin'ny taranaka teo aloha ihany no misy fihenam-bidy ary sendra azy ireo ny vidiny taloha. Izany hoe, izay namarotana azy ireo taloha Apple dia nanambara ny iPad Air sy iPad Mini vaovao.
Ny fihenam-bidy navoaka hatramin'ny 30% raha ny iPad Mini miaraka amin'ny Retina Display 16GB WiFi tsy zavatra toy izany izy ireo. Raha tsiahivina dia 2 euro ny tena vidin'ny iPad Mini 289, ka raha amidy amin'ny 269 euro miaraka amin'ity fampiroboroboana El Corte Inglés ity dia tsy hampidinina 30% izany fa 20 euro fotsiny raha ny tena vidiny. Ary na dia mbola handresy aza aho, talohan'ny nanoratako ity lahatsoratra ity dia efa nijery tranokala isan-karazany nandritra ny andro maromaro aho, ary tamin'ny fiandohan'ny herinandro, tao amin'ny El Corte Inglés dia tsy nahazo fampiroboroboana izy ireo, ary nitanisa ny iPad Mini 2 tao amin'ny ny vidiny 389 euro teo aloha toy ny mahazatra.
Fisafotofotoana ny nomenclature
Fa raha tsy ampy ny vidiny lafo hanandrana hahazoana ny iPad Mini 2 amin'ny internet, dia nahita antsipiriany hafa aho. Ny tsy filazan'i Apple mivantana isa ao amin'ireo nomenclature vaovao amin'ny takelaka misy azy dia miteraka olana vitsivitsy. Ao amin'ny tranonkala sasany dia tanisain'izy ireo ny iPad Mini sy iPad Mini 2 miaraka amin'ny anarana mitovy, amin'ny vidiny samihafa. Ary mety misy ny mpampiasa sasany, nefa tsy mandinika loatra ary mieritreritra fa mividy ny fitaovana farany indrindra amin'ireo fitaovana roa avy amin'ny taranaka teo aloha izy, dia niafara tamin'ny fahagagana rehefa tonga tao an-trano ny takelaka mbola miforitra miaraka amin'ny mpanera A5.
Ka raha mikasa ny hividy a ianao iPad Mini, mitandrema tsara amin'ny vidiny, ary mitandrema indrindra amin'ireo maodely, fandrao manao fahadisoana ianao amin'ny farany ary mandoa vola amin'ny fitaovana efa eny an-tsena efa roa taona fa tsy mahazo ilay iray taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Raha hividy iPad Mini Retina ianao dia mitandrema amin'ny vidin'ny varotra
Cristina, esory ny litera "k" amin'ny anaran'i Fnac. (Mety hitranga amintsika rehetra izany.)
Cristina Torres sary placeholder dia hoy izy:
Miala tsiny. Hadisoana amin'ny fanoratana. Efa voahitsy. Misaotra tamin'ny fanamarihana 🙂 Salama !!
Valiny tamin'i Cristina Torres
Tsara ny lahatsoratra. Ny hafetsen'ny magazay sy ny mpivarotra amin'ny famoahana entana toa ny varotra tsy izy.
Ahoana ny fomba hifehezana ny Spotify amin'ny solosainao amin'ny iPhone